dimanche, 15 avril 2018 19:00
Sambava: 118.347 ny voasoratra anaty lisi-pifidianana
Nifarana ny 14 aprily 2018 tamin'ny 23h55mn ny fanakatonana ny lisi-pifidianana ka io 118.347 io no voarakitra farany tao anatin'ny Kaominina miisa 28 ary Fokontany 326, ary notsinjaraina birao fandatsaham-bato miisa 350.
Io no nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany 15 aprily 2018 tetsy amin'ny biraon'ny CENI Sambava Centre.
dimanche, 15 avril 2018 18:42
Tolagnaro: Nanatanteraka filan-keviparitra ny MFM
Ny zoma 13 aprily no nifamotoana tamin'ireo mpikambana MFM ny Anôsy, tao amin'ny hotely Croix du Sud Le Dauphin Ampotatra Tolagnaro, ny birao foibe notarihin'ny filoha nasionaly Manandafy Rakotonirina.
Natao izao filankevi-paritra izao, hoy i Manandafy Rakotonirina hamariparitana ny politika ankapoben'ny antoko sy ho fanomanana ny fiatrehana ny fifidianana ho avy.
Ny loholona Rakotovazaha Olivier, sady Sekretera jeneralin'ny MFM, kosa no nanazava fa matoa manohana ity fitondrana HVM ity ny Mafana dia mitovy ny tanjona araka ny vina Fisandratana 2030.
dimanche, 15 avril 2018 18:41
Fianarantsoa: Mpitsara iray voatifitra tao an-tranony
Nitrangana vaky trano misesy ao amin'ny Fokontany Ankofafa, Fianarantsoa tao anatin'ny herinandro.
Dimy no isan'izany tao anaty ny dimy andro. Saika trano fivarotana avy ireo toerana ireo. Ny alin'ny sabotsy hifoha ity Alahady 15 aprily no nanafika tao amin'ny trano fonenan'ny mpitsara iray, filoha lefitry ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany eto Fianarantsoa, ireo mpamaky trano ireo.
Voatifitra teo amin'ny lohany ilay raim-pianakaviana ary nentina avy hatrany teny amin'ny toeram-pitsaboana.
Ny atoandron'ity alahady ity no tonga teto Fianarantsoa ny fiaramanidina nitondra azy hotsaboina any an-drenivohitra.
Mitebiteby ireo mponina ao amin'io Fokontany io ankehitriny noho ny fanafihana mihamahery vaika toy izao.
Tsy mbola ahenoana fanamborana ny nahavanon-dratsy momba ireo tranga ireo eny anivon'ny Commissariat tandrify.
dimanche, 15 avril 2018 17:07
Vohipeno: Fanandratana Olotsambatra an'i Ramose Lucien Botovasoa
Vohipeno: Fanandratana Olotsambatra an'i Ramose Lucien Botovasoa.
dimanche, 15 avril 2018 13:44
Siria: Nodarofan'ny Amerikanina baomba
Taorian'ny zera baomba, heverina ho simika nataon'ny fitondrana sirianina Bachar Al-Assad, ny 7 avrily lasa teo tao Douma, tanàna ao Ghouta orientale, dia nanambara i Donald Trump, Filoha amerikanina, fa dia nanome ny valikafatra izy ka dia nodarohan'ny Amerikanina, ny alin'ny zoma hifoha ny sabotsy 14 avrily, miaraka amin'ny Frantsa sy Royaume-Uni ireo toerana 3 famokarana baomba simika sirianina.
Raha ny filazanan'ny fampitam-baovao sirianina sy rosianina, dia 110 misila no nafatratra tao Damas, izay nisy ihany koa no potiky ny fiarovana sirianina.
dimanche, 15 avril 2018 10:32
Famaranana lisi-pifidianana: 9.903.319 ireo mpifidy voasoratra anarana
Mikatona tanteraka amin'ity andron'ny 15 aprily ity ny fanavaozana isan-taona sy fanadiovana ny lisi-pifidianana. Io no lisi-pifidianana hampiasaina amin'ireo fifidianana ho avy.
Nahatratra 9.903.319 ny isan'ireo mpifidy voasoratra anarana. Nanodidina ny 240.000 kosa ireo anarana niverimberina hita tamin'ny fanadiovana ka nesorina tao anaty lisitra.
dimanche, 15 avril 2018 10:08
Finoana Katolika: Hambara ampahibemaso anio ny maha Olontsambatra an-dramose Lucien Botovasoa
Tanterahina eto Vohipeno anio 15 aprily 2018 ny fotoam-pivavahana lehibe hanambarana ampahibemaso sy hanandratana eo amin'ny laharan'ny Olontsambatra an'i Lucien Botovasoa.
dimanche, 15 avril 2018 10:07